I-at & t isebenzisa i-carrier iq kunye nesixhobo sayo esibizwa ngokuba luphawu lwendawo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-AT & T isebenzisa i-IQ yenethiwekhi kunye nesixhobo sayo esibizwa ngokuba nguMark Spot
I-AT & T isebenzisa i-IQ yenethiwekhi kunye nesixhobo sayo esibizwa ngokuba nguMark Spot
Njengabathwali kunye nabavelisi baqhubeka nokungena ngokuchaza esidlangalaleni ukuba loluphi ulwazi lweCarrier ye-IQ oluyithumele kuSenator Al Franken ngoLwesithathu odlulileyo,I-AT & T yeyokugqibela yokwenza izityhilelo. Kuqala, umphathi ophetheyo uthe usebenzise i-Carrier IQ ukusukela ngoMatshi walo nyaka kunye ne-Motorola Bravo isiphatho sesandla sokuqala ukuba sisixhobo sifakelwe. Ngaphandle kwesoftware yohlalutyo, umphathi ophetheyo uthe Inikeze usetyenziso olubizwa ngokuba nguMark the Spot ukusukela ngo-2009 . Le app yesiko ekhutshelweyo kwaye ifakwe kwifowuni yomthengi & apos ngumthengi ngokwakhe, ngokungafaniyo ne-IQ yeQabane eza kuqala ngaphandle kwemvume yomsebenzisi.
Uluvo olungemvaPhawula indawokukuba ngalo lonke ixesha ushiya umnxeba okanye unazo ezinye iingxaki kwinethiwekhi ye-AT & T, uya kuvula usetyenziso kwaye uxele ingxaki kumphathi. Oku kuyilelwe ukuba kubasebenzisi be-Apple iPhone emva xa i-AT & T yayinokukhetha kwe-US kwifowuni kwaye abasebenzisi abaninzi babekhalaza ngomgangatho wenethiwekhi ye-AT & T & apos; Phawula indawo ekumiselwe kuyo ngoDisemba 2009 nasekuqaleni konyaka,I-IQ yenethiwekhi yaphakanyiswa kunye neMTS.
Ngokwe-AT% T, yi-1% okanye i-900,000 kuphela yeziphatho zayo ezineCarrier IQ efakiweyo nokuba inesoftware okanye usetyenziso lweMTS. Kwelo nani,ngama-575,000 kuphela anika ingxelo kwi-AT & T.. Umphathi wongeza ukuba akabelani ngedatha nayo nayiphi na inkampani engeyiyo ye-AT & T, urhulumente okanye unyanzeliso lomthetho. Nangona kunjalo, iyahambelana nemiyalelo yenkundla, i-subponeas kunye neminye imiyalelo yomthetho.
Ngaphandle kwezixhobo ze-Motorola Bravo, i-AT & T & apos; izixhobo ze-Android ezineCarrier IQ efakiweyo yiPatech Pocket, LG Thrill 4G, ZTE Avail, Sony Ericsson Xperia PLAY kunye neMotorola ATRIX 2.
umthombo: I-AT & T nge AndroidCentral
indlela yokuvula ubeko lwescreen sasekhaya
I-samsung vs google isicatshulwa kwintetho
Ungasithumela njani isicelo seGrafu ye-JS kwiJMeter
I-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge: 10 yeyona midlalo ilungileyo
Iprototype yesizukulwana sesi-5 se-Apple iPod touch ityhila iipini ezingama-30
Iiholide ziphelile, kodwa umbulali we-OnePlus 8T uyaqhubeka nokuza
Ukuthelekiswa kwe-Samsung Galaxy Note 8 kunye ne-Galaxy S8 +
IAmazon kunye nokuThenga okungcono zineGoogle kunye neapos's Pixel 3a kunye 3a XL kwintengiso kwizaphulelo ezinkulu
k6 -Awona mava oPhuculo oluBalaseleyo oVavanyo loMthwalo